Fahataran'ny famatsiana solika amin'ireo tobim-pamokarana herinaratra eny Ambohimanambola sy Mandroseza no antony, hoy ny filazana mialoha nataon’ny JIRAMA. Raha ny resaka hafa any ambadika, dia misy faktiora tsy voaloha sy tara tokony hefana. Ahiana ho don-tandroka avy amin’ireo Kaompania sy mpandraharaha matanjaka ara-tsolika sy misehatra amin’ny famatsiana herinanatra. Ny 28 aprily i Andry Rajoelina no nilaza fa tsy maintsy hampidininy ny vidin-tsolika. Nitsefotra ve ? Mafy ary mifehy ny toekarena eto ireo mpandraharaha goavana amin’io sehatra io. Ny 17 mey teo ny teto amin’ny Gazety Tia Tanindrazana no namoaka lahatsoratra mifandraika amin’izany fa mandrahona ny hikomy ny karana. Ny solika, ny herinaratra, ny banky, ny indostria, tambajotran-tserasera… dia saika izy ireo no mifehy azy. Eo am-pelantanany ny aim-pirenena, ary sarotra ny hiady amin’ireo raha ny zava-misy amin’izao aloha. Tsy vitan’ny vava be nataon’ny Filoha fa mila paikady sy fifandresen-dahatra. Adin’ny 3 ny jiro ny tapaka, dia efa olana be eto, mainka fa hikomy herinandro ireo.